ခက်မာ: August 2011 1. 2.
၂၀၁၀သြဂုတ်လ၂၈ရက်မှာကျမခင်ပွန်းရဲ့အမေ၊ကျမယောက္ခမကြီးဆုံးသွားပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျတော့ယောက္ခမနဲ့အတူနေခဲ့ပြီးသားနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့လက်ပေါ် မှာကြီးခဲ့တာဆိုတော့ယောက္ခမဆိုပေမယ့်အမေလိုပါပဲ။ကျမရဲ့မွေးမိခင်ကိုကျမက အမေလို့ခေါ်ပေမယ့်ကျမခင်ပွန်းအပါအ၀င်သားသမီးငါးယောက်ကမေမေလို့ခေါ်တဲ့ ယာက္ခမကိုတော့ သူ့သားသမီးတွေခေါ်သလို'မေမေ' လို့ပဲလိုက်ခေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လူတဖက်သားကိုကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခမပိုစေချင်တာ၊ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်း သူကိုတောင်ကြံဖန်ပြီးအကောင်းမြင်ကျေးဇူးတင်တတ်တာ၊ ဘယ်လိုအခြေ အနေမျိုး မှာမှစကားကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းမပြောတာတွေကိုမေမေ့ဆီကအတု ယူခဲ့ရပါတယ်။
အေးချမ်းရာသို့သွားလေသူ ( ပန်းချီမောင်မောင်သိုက်)
၂၀၀၉ ခုနှစ်နွေဦးမှာ ပန်းချီမောင်မောင်သိုက် ဆွဲပေးခဲ့တဲ့ ကျမပုံတူ..
သောကြာနေ့ နေ့လည် ၃နာရီပတ်ဝန်းကျင်ကြီး ကိုအော်ပီကျယ်ကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ လိုက်တော့ " မအိပ်သေး ဘူးလား" လို့နှုတ်ဆက်မိပါတယ်။ " မနက် ၃ နာရီကြီးနိုး လာတာ၊ ကိုသိုက်အတွက်စိတ်မကောင်းလို့" ဆိုပြီး သူကပြန်ပြောတော့ ကျမကြက်
သေသေသွားမိတယ်။ “ သောကြာနေ့ကဆုံးတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့သဂြိုလ်မယ်လို့ သူကဆက်ပြောတော့ သိပ်မကြာခင်ကြားရတော့မယ်မှန်းသိတဲ့သတင်းပေမယ့် ရင်ထဲမှာလှိုက်ကနဲဖြစ်သွား ပြီးအကြာကြီးငြိမ်သက်သွားမိပါတယ်။ ဦးမောင်မောင် သိုက်ကွယ်လွန်ရှာပြီ။ ကျမတို့မြန်မာအနုပညာ လောကအတွက် အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြုံရပြန်ပြီ။